Degso Viber loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (81.25 MB)
Barnaamijka farriinta moobiilka ee caanka ah Viber ayaa hadda laga heli karaa Windows-ka. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka Viber Windows, waxaad awoodi doontaa inaad farriin iyo wicitaanno telefoon kula dirto isticmaaleyaasha Viber ee liiskaaga si bilaash ah.
Barnaamijka Viber Windows wuxuu si otomaatig ah u waafajiyaa xiriirada, farriimaha iyo taariikhda wicitaanka ee ku saabsan codsiga Viber qalabkaaga mobilada. Sidaas waxaad awoodi doontaa inaad ka wado raaxada kombuyutarkaaga si aad u bilowdo wadahadal ku saabsan Viber.
Qalabka Viber Windows Edition:
Tayada ugu fiican ee wicitaanka codka HD
Udiraya fariimaha qoraalka ah iyo sawiro
wada hadalka kooxda
Looma baahna diiwaangelin haddii aad Viber ku rakibtay qalabkaaga gacanta
Isku xir xiriiradaada iyo fariimahaaga inta udhaxeysa taleefankaaga gacanta iyo Windows adiga
Wicitaanka socda ee u dhexeeya qalabka
Cabirka Faylka: 81.25 MB
Horumar: Viber Media Inc.